“Lukaku waa dammiin, mana ahan qaladka Chelsea” – Paolo Di Canio – Gool FM
(London) 18 Okt 2021. Romelu Lukaku waa ciyaaryahan dammiin ah oo shaqeysanaya, mana ahan qaladka Chelsea in weeraryahankan uu shan kulan gool la’aan ahaado, waxaa sidaas qaba halyeygii kooxda West Ham ee Paolo Di Canio.
Halyeyga Kooxda West Ham United ayaa dhaleeceyn u jeediyey ciyaaryahanka ay kooxda Chelsea xagaagii kula soo saxiixatay 98 milyan oo gini, kaddib markii uu dhexda ka galay abaar dhanka goolasha ah, sidaas darteed Di Canio lama dhacsana qaab ciyaareedka xiddigan reer Belgium.
Isagoo la hadlayey Sky Calcio Club show, 53-sano jirkaan ayaa yiri: “Waxaan maqlay Bergomi oo Osimhen la barbardhigaya Lukaku, balse Osimhen waa xiddig leh xamaasad taas ka duwan, mana ahan dammiin isaga oo kale ah.
“Marka ay xaaladdu adkaatay wax gool ah ma uusan u dhalin Chelsea shan kulan, mana ahan qaladka Chelsea, waxayna ku jiraan kaalinta koowaad la’aanta goolashiisa.
“Lukaku gool ma dhaliyo, Lukaku waxa uu socodsiiyaa shaqada kooxda, waa sida uu Fernando Llorente ka ahaa Juventus-tii Conte.
“Xitaa Lukaku wuu ka xoog badan yahay Llorente, Lukaku waa ciyaaryahan wax ka qaban kara kulammo noocoodu cayiman yihiin.” Ayuu hadalkiisa ku sii daray laacibkii hore ee Talyaaniga.
Di Canio, kaasoo in kabadan 100 kulan u ciyaaray West Ham ayaa u dhaliyey 47 gool, waxaana uu ugu dambeyn Lukaku la barbardhigay 36-sano jirka Fernando Llorente.